'အဓိကကတော့ အားလုံးရဲ့ ညီညွတ်မှုကြောင့် ပရိသတ် အကြိုက်တွေ့ခဲ့တာပါ' - ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် - Yangon Media Group
ပရိသတ်ကြည့်ရှုမှု ဝင်ငွေစံ ချိန်တင်ခဲ့သော လက်ရှိရုံတင်ပြသလျက်ရှိသည့် ”ဘော်ဘော်က ထှော်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအား ဖန်တီးခဲ့သော ဒါရိုက်တာကိုပေါက်နှင့်တွေ့ဆုံကာ ဇာတ်ကားဖန်တီးမှုအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ် သက်ပြီးတော့ ယခုလိုပဲ မေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မေး- ”ဘော်ဘော်ကထှော်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက ပရိသတ်အရမ်းကိုအားပေးကြတယ်ဆို တော့ ဖန်တီးသူတစ်ယောက်အ နေနဲ့ ခံစားရတဲ့ခံစားချက်လေးလည်းပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – အရမ်းပျော်တာပေါ့။ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာကို ပရိသတ်ကအသိအမှတ်ပြုတာဆို တော့ ကျေးဇူးလည်းတင်ရပါတယ်။
မေး – ဒီဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ကျွန်တော် ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြိုက်တာက ဒီဇာတ်လမ်းမှာပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းပေါ့နော်။ တစ် ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မနက်မိုးလင်းလို့ နှုတ်ဆက်ကြတာက ပါးရိုက်ပြီးတော့ နှုတ်ဆက်တာကို သ ဘောကျတာ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဒီဇာတ်လေးကိုယူဖြစ်လိုက်တယ်။ ဇာတ်လမ်းက တခြားပြင်ရတာ တွေလည်း ရှိတာပေါ့နော်။ ပထမဦးဆုံး ဒီဇာတ်လမ်းကိုပြခဲ့တဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးက ဇာတ်ကိုမကြိုက်လို့ မရိုက်ဘူးလို့ငြင်းခဲ့တယ်။ ဒုတိယ မြောက်ပြဖြစ်တဲ့ အခုထုတ်လုပ် ရေး လာဗင်ဒါထုတ်လုပ်ရေးကျ တော့မှ ရိုက်ကူးဖြစ်တာပေါ့နော်။
မေး- ရိုက်ကူးတဲ့နေရာကလည်း တခြားဇာတ်ကားတွေနဲ့ မတူဘူး နော်။ အခက်အခဲတွေရှိခဲ့သေးလား။
ဖြေ- ဒီဇာတ်လမ်းက ကျွန်းတွေ ပေါ်မှာ သွားရိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရိုက်ကူးနေကျဖြစ်တဲ့ ချောင်းသာတို့၊ ငွေဆောင်တို့မှာ သွားမရိုက်ချင်ဘူး။ အဲဒါ Location အသစ်ကိုရှာချင်တယ်။ ကော့သောင်းတို့၊ မြိတ်တို့၊ ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်းတို့ကလည်း ရိုက်ဖူးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ရေးနားက ကဗျာဝဆိုတဲ့ ကမ်း ခြေကိုသွားကြည့်ပြီးတော့မှ သ ဘောကျလို့ ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်းတစ်ခုလုံးမှာ တခြားသူတွေလည်းရှိလို့မရဘူး။ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းလည်း ရှိလို့မရဘူး။ ဝါးတို့၊ အုန်းလက်တို့နဲ့ ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ပဲရှိရမှာဆို တော့ အဲဒါတွေလည်းကြည့်ရတယ်။
မေး- နောက်တစ်ခုက သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပရိသတ် တွေက သဘောကျကြတယ်။ သီချင်းဖန်တီးဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ဘော်ဘော်ကထှော်လူမျိုးဆိုတာက အပြင်မှာတကယ်မရှိဘူး လေ။ မရှိတာကို ပရိသတ်တွေ တကယ်ထင်အောင်ရိုက်ပြရတာ။ ရိုက်ပြရတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတာရယ်။ လူမျိုးတစ်စုရဲ့ ဓလေ့စရိုက်တစ်ခုကိုလည်း ထည့်ချင်တာရယ်ကြောင့် ဖြစ်သင့်တာတွေ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေကို စဉ်းစားကြတော့ ဇာတ်ကားရိုက်နေရင်းနဲ့ အားလုံး စဉ်းစားကြတော့ ကိုခင်လှိုင်ကနေ ပြီးတော့ စအော်တယ်။ နောက်တစ်ယောက် တစ်ပေါက်စအော်ကြတာကနေပြီးတော့ ဒါလေးကိုမ ဆိုးဘူး။ နားထဲစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ ထည့်ဖြစ်သွားတာပါ။ အဓိကကတော့ အားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှု ကြောင့် ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့ခဲ့တာပါ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ မျောက်ငိုသီး အများအပြား ဝယ်ယူမှုကြောင့် ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ်သန်း ??
ကင်ပွန်းတောင် ဆည်တွင် ကလေးတစ်ဦး Selfie ဆွဲရာမှ ရေထဲပြုတ်ကျကာ ၎င်းနှင့်အတူ လိုက်လံ ကယ်ဆယ်သူ ကလေးတ??